Xisbiga Waddani oo Ka Hadlay Buuga uu Qoray Hoggaamiye Xirsi |
Xisbiga Waddani oo Ka Hadlay Buuga uu Qoray Hoggaamiye Xirsi
Guddoomiyaha guddiga anshax marinta, ahna xubin ka mida hoggaanka sare ee Xisbiga mucaaradka ah ee Waddani ayaa eedayn culus u jeediyay hoggaamiyaha xisbigooda Xirsi Cali Xaaji Xasan, waxaanu sheegay in uu afkiisa ka qirtay in uu ku kacay fal dembiyeed qaran.
Cali Axmed Cabdi (Cali Cantar), waxa kale oo uu si adag u naqdiyay buugga la magac baxay ‘Miyiga illaa Madaxtooyada’ oo uu qoray hoggaamiyaha xisbiga Waddani Xirsi Cali Xaaji Xasan, waxaana uu yidhi “Xirsi waxa uu buuggiisa kaga hadlay, muddadii odayga xanuunku ku soo kordhay iyo sida ay ugu wada tashadeen. Waxay ahayd in ay dalka badbaadiyaan ayey ahayd oo ay sheegaan ee aanay qarin, sida madaxweynihii xilka hayay u leeyahay xilka ma hayn karo, waxa ay ahayd inay dalka badbaadiyaan ee aanay qarin taasi dembi ayey noqonaysaa.”
Guddoomiyaha guddiga anshax marinta xisbiga mucaaradka ah ee Waddani Cali Axmed Cabdi (Cali Cantar), waxa uu xusay in xilligan aan loo baahnayn in buuggaas la qoro, waxaana uu yidhi “Buugga in runta lagu qoraa way wanaagsan tahay. Laakiin may ahayn Xirsi inuu hadda qoro, inuu dib u yara dhigo ayey ahayd, sababta oo ah wixii ayaa cusub, wixii cusubna in la sheego maaha.”
Xirsi Cali Xaaji Xasan oo muddo ahaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee xukuumaddii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, wakhtigii uu wasiirka ahaa madal kasta ka sheegi jiray in madaxweyne Silaanyo uu caafimaad qabo, balse hadda oo uu yahay hoggaamiyaha Xisbiga mucaaridka ah ee Waddani, waxa uu ku sheegay buuggiisa ‘Miyiga illaa Madaxtooyadda’ in madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Siilaanyo uu qabay xannuun suuliya xasuusta.
Dastuurka qaranka Xeer No.14 oo ku suntan ilaalinta siraha qaranka ayaa qodobkiis A- waxa uu sheegayaa “muwaadin kasta oo xil qaran hayn jiray waxa ku waajib ah ilaalinta sirta qaranka inta uu nool yahay, kama faaloon karo marka uu shaqada ka tago isaga oo u adeegsanaya dan siyaasadeed.”